Maqaalo | Dadweyne – U Adeegaha Dadweynaha
Maanta oo ay Taariikhdu tahay bishii May 15-da waxay ku asteysan tahay Maalinta dhidibada loo dhigay Ururkii Dhallinyaradda SYL ee Gobanima-doonka ahaa sannadkii 1943-kii. Ururka SYL waxa uu Udub-dhexaad u ahaa Halgankii Gobanimadoonka ee Ummadda Soomaliyeed ee ay kula dagaalameen Gumeystayaashii kala qoqobay dalkeenna Hooyo, iyadoo Halgankaasi ahaa mid ay u wada mideysnaayeen qeybaha kala duwan ee Ururadda Bulshadda. Ururkii ...
Mucaaradka Holland: “Ha la caddeeyo Kaalinta Sirdoonka Milliteriga (M.I.V.D) ee Droneska Maraykanka duqeynta ka gaysta gudaha Somalia”.
Xisbiyadda Mucaaradka Holland ayaa ugu baaqay Xukuumadda inay faahfaahin ka bixiyaan Kaalinta Hay’adda Sirdoonka Milliteriga Holland (M.I.V.D) ka qaataan Weeraradda Diyaaradaha Droneska Maraykanka ka geystaan gudaha dalka Somalia. Xisbiyadda D66 iyo SP ayaa ku baaqay in Caddaymo buuxa laga bixiyo arrinkaasi, kadib, markii ay Labo Dhibanayaal Soomaali ah dacwad ku soo oogeen Dowladda Holland. Xildhibaan Harry Van Bommel oo ka ...
Maxaad kala socotaa Xogta Hoose ee uu Daahir Abdulle Duubane ku guursaday Xaaskiisa Sahra Shariif?
Akhristayaal, Xigasho, Xaqiiqo-raadin iyo Xooraansi dheer kadib, waxaan maanta idiin soo gudbin doonaa Warbixin ay Sawirro ku lifaaqan yihiin, kuwaasi oo aynu raad-raac dhab ah ku ifinayno waxyaabo badan oo idinka dahsoonaa. Dahir Abdulle Alasow, waa Milkiilaha Waagacusub iyo in ka badan 35-Websites uu ugu talagalay inuu Ummadda isaga aflagaadeeyo, isla markaana uu dadka ugu hanjabo, lacago baad ahna kaga ...
Warbixin + Muuqaal Video: Dhaqdhaqaaqe deggan Belgium oo ku baaqay Fatwo ka dhan dadka aan Muslimka ahayn.
Xag-jire magangelyo ka helay Belgium ayaa isku bedelay inuu Shabakaddaha Bulshadda ka iclaamiyo Fatwo ka dhan ah Soomaalida Kirishtaanka, oo uu kaga digay inay dib u dhisan Kaniisadda (A Catholic Church) oo ku taalla caasimadda Somalia ee Muqdisho. Muuqaalkiisa Video ee xanaaqa qeylada leh, waxa uu Xag-jire Maxamuud Maxamed Carab ku tilmaamay Kirishtaanka inay aad uga xun yihiin xubnaha Kooxda ...
VIDEO: Dhaqdhaqaaqe deggan Belgium oo ku baaqay Fatwo ka dhan dadka aan Muslimka ahayn.
Xag-jire magangelyo ka helay Belgium ayaa isku bedelay inuu Shabakaddaha Bulshadda ka iclaamiyo Fatwo ka dhan ah Soomaalida Kirishtaanka, oo uu kaga digay inay dib u dhisan Kaniisadda (A Catholic Church) oo ku taalla caasimadda Somalia ee Muqdisho. Muuqaalkiisa Video ee xanaaqa qeylada leg, waxa uu Xag-jire Maxamuud Maxamed Carab ku tilmaamay Kirishtaanka inay aad uga xun yihiin xubnaha Kooxda ...
FAALLO: Barlamaanka Federalka oo go’aan adag ka qaatay Kenya.
Xildhibaanadda Barlamaanka Federalka Soomaaliya oo lagu xaman jirey inay had iyo jeer ansixiyaan Mooshinka Dufanaysan ayaa waxay maanta si wadajir ah u ansixiyeen Go’aan ku boorinayo Dowladda Federalka inay dadaal u gasho sidii Ciiddanka Kenya looga saari lahaa gudaha dalkeenna. Xildhibaanadda oo malaha ay weli ku jirto Dareenka Waddaniyadda iyo Axyaa Waddan ayaa waxay qaateen go’aan marka loo fiiriyo dhinaca ...
(Faallo): Xeelladaha Dowladda Kenya ku boobayso xuduudka Somalia.
Olol-siyaasadeed oo wejiyo badan leh ayaa waxa uu ka dhex aloosan yahay Dowladaha Somalia iyo Kenya, waxaana uu khilaafkaasi horseedi kara inuu sii xumaado Xiriirkii Diplomaasiyadeed. Dowladda Kenya waxay sheeda ka eegaysaa Kacsanaanta Siyaasiyiinta iyo Madaxda Dowladda Federalka oo iyagu xilligan taagan “Wixii Dhiig lahow Kaca”. Dareenka Waddaniyadda ee Soomaalida ayaa u muuqda mid xayi ah oo aanu saamayn ...
Waalida Daahir-cawir: Buufis Xil-sheegasho iyo Qabiil-sheegasho. Qeybtii 1-aad
Dadka yaqaana Daahir-cawir waxay 100% rumeysan yihiin inuu noqday Shaqsi Fashilmay, Ceebaysan, Duliyeysan, maskax dhiman noqday. Waana hubaal haddii uu qofka xishood iyo dareen dadnimo lahayn inay ka suurtowdo inuu ku dhaqaaqo Fal kasta, isla markaana uu Af-dheeridiisa aysan ka nabad-gelin Ummaddaha kale. Tan iyo markii yimid dalka Holland waxa uu la soo baxay Dabeecad liidata, balse uu isagu u ...
(Xog): Dhibanayaal afka furtay kadib markii xayiraadda lagu soo rogo Websaytyadda Daahir Calasow.
Kadib, markii Wareegto ka soo baxday Xafiiska Xeer-ilaaliyaha Qaranka maalinti Isniinta ee la soo dhaafay lagu amray in la xayiro in ka badan 30 Wabsayt oo lagu eedeeyey inay warar been qoraan, ayaa waxa uu Weriye ka socda Wargeyska The Horn Observer Media la hadlay dhowr qof si uu u helo wax badan. Yaasiin Maaxi oo ah Siyaasi Somali ...
Warbaahinta Holland oo Daahir Calasow ku asteeyey Dembiile !!!
Iyadoo ay isa soo tarayaan Dacwooyinka ka dhanka ah Milkiilaha Waagacusub.com, Dembiile Daahir-cawir ayaa waxay Saxaafadda Holland bilaabeen inay Falaanqeyn ku sameeyaan Eedeymaha loo haysto iyo haddii uu isagu yahay Saxafi Run ah. Idaacadda Dutch Public Radio “NRP” waxay dhawaan Warbixin dheer oo Dabagal ah ku lafa-gureen Shaqsiyadda Daahir Calsow, waxayna isweydiiyeen Daahir ma Saxafi baa mise shaqsi dadka ...